Tsingerintaona fahafolo :: Manomana fety ho an’ny ankizy ny « Kilokolo » • AoRaha
Tsingerintaona fahafolo Manomana fety ho an’ny ankizy ny « Kilokolo »
Vovonana hanomezana vahana ny ankizy sy ireo manana fahasembanana ny « Kilokolo ». Anatin’ny dihy sy ny kanto isan-karazana ampianarina ny ankizy no hahafahan’ny tarika Lovatiana, mpikarakara ny hetsika, maneho sy miady ho an’ny zon’ny ankizy.
Mankalaza ny fahafolo taonany izy ireo amin’ity taona ity. Lanonana goavana no atolotr’ izy ireo eny amin’ny Tokontanibe Ambohimanga Rova amin’ny 17 jolay ho avy izao. Epp sy sekoly tsy miankina ary tarika mpandihy 15 no handray anjara amin’izany. Tsy ny dihy ihany no hahazo laka fa hampitolagaga an’ ireo ankizy ihany koa ny mpana- kanto roa avy any Frantsa amin’ ny alalan’ny marionety.
« Isan’ny tanjona voalohan’ ity kilokolo ity ny fitaizana ara- tsosialy sy ara-kolontsaina an’ ireo ankizy amin’ny alalan’ ny kanto, toy ny dihy ankehitriny. Tsy ny eto Analamanga ihany no misy azy fa efa miely patrana any Vakinankaratra, Boeny, Itasy ary Mahabo sy Analanjirofo ihany koa. Nahatratra 5000 ireo ankizy nandray anjara ary 200 ireo mpampi- anatra nandritra izay folo taona izay », araka ny fanazavan’ny mpikarakara.
Ankoatra ireo fikambanana sy ivon-toerana maro manerana ireo faritra dia miara-miasa akaiky amin’ity vovonana ity ireo fari-piadidiam-pampianarana.
Fankalazana goavana Feno 16 taona nitoriana Filazantsara ny « Ampifitia »
Zavakanto an-tanàn-dehibe Ambohipihaonan’ny kanto marolafy ny “Attent’Art”
Dome RTA Ankorondrano Efa tonga ireo vahiny mpandray anjara amin’ny « Ambony Ambany 2019 »
Fintin’ny 40 taona an-tsehatra :: Hifamotoana amin’ireo mpankafy azy etsy Ampefiloha i Ricky